AHOANA NO HAMPIDIRANA SARY AO AMIN'NY TENY - TENY - 2019
Apetaho ao amin'ny rakitra Microsoft Word ilay sary.
Matetika, miara-miasa amin'ny dokam-barotra amin'ny MS Word dia tsy voafetra amin'ny lahatsoratra fotsiny. Noho izany, raha toa ianao mandefa taratasy, boky fianarana, bokotra, karazana tatitra, asa vita, asa fikarohana na fizarana, dia mety mila mampiditra sary na toerana iray ianao.
lesona: Ny fomba fanaovana bokikely amin'ny Teny
Azonao atao ny mampiditra sary na sary ao anaty rakitra iray amin'ny teny roa - tsotra (fa tsy ny marina indrindra) ary somary sarotra, nefa mety ary mora kokoa amin'ny asa. Ny fomba voalohany dia ny fanaovana kopia / fametahana mandritrana na manindrona rakitra iray amin'ny rakitra, ny faharoa dia amin'ny fampiasana ireo fitaovana fanorenana ao amin'ny programa avy amin'ny Microsoft. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hampidirana sary na sary ao amin'ny lahatsoratra marina ao amin'ny Teny.
lesona: Ahoana no fanaovana diagram ao amin'ny Word
1. Sokafy ny rakitra an-tsoratra izay tianao hampidirana sary iray ary tsindrio eo amin'ny toerana misy ny pejy izay tokony ho izy.
2. Mandehana any amin'ny takelaka "Insert" ary tsindrio ny bokotra "Drawings"izay ao amin'ny vondrona "Illustrations".
3. Ny varavarankely Windows Explorer sy ny ordinatera misokatra dia misokatra. "Sary". Sokafy ny lahatahiry misy ny rakitra maodim-pahalalana ampiasaina amin'ity varavarankely ity ary tsindrio eo.
4. Fidio ny rakitra (sary na sary), tsindrio "Insert".
5. Ampidirina amin'ny rakitra ilay rakitra, aorian'izany dia hisokatra avy hatrany ny tabilao. "Endrika"misy fitaovana hiasa amin'ny sary.
Fitaovana fototra hiasa amin'ny antontan-taratasy
Sary famaranana: Raha ilaina, azonao atao ny manala ny sary eo an-toerana, manazava bebe kokoa, esory ny singa tsy ilaina.
Fanitsiana, fiovan'ny loko, vokatra ara-javakanto: Amin'ireny fitaovana ireny dia azonao atao ny manova ny lokon'ny loko. Ireo fatran-javatra azo ovaina dia ahitana ny hamirapiratana, ny fifanoheran-tarehy, ny sata, ny loko, ny safidy hafa ary ny maro hafa.
Styles of drawings: Mampiasa ny fitaovana "Express Styles" ianao, dia afaka manova ny endrik'ilay sary nampidirina amin'ny rakitra, anisan'izany ny endriky ny endrika sary.
toerana: Ity fitaovana ity dia ahafahanao manova ny toeran'ilay sary eo amin'ilay pejy, "mampifanaraka" azy ao amin'ny votoatin'ny lahatsoratra.
Text wrap: Ity fitaovana ity dia mamela anao tsy hametraka fotsiny ny sary eo amin'ny taratasy, fa mba hampiditra azy mivantana ao anaty lahatsoratra ihany koa.
habe: Ity dia vondrona fitaovana ahafahanao maniry sary iray, ary mametraka mari-pahaizana mazava ho an'ny saha, ao anatin'izany ny sary na ny sary.
Fanamarihana: Ny faritra anatin'io sary io dia manana endrika manana endrika mitovy, na dia manana endrika hafa aza ilay zavatra.
hanova haben: Raha tianao ny hametraka ny habeny marina amin'ny sary na sary, ampiasao ilay fitaovana "Size". Raha toa ka ny tanjonao dia ny mamelatra ny sary mifanaraka amin'izany, dia makà iray amin'ireo boribory mamolavola ny sary ary tsindrio izany.
mifindra: Raha te hampifindra ilay sary fanampiny ianao dia tsindrio eo amin'ny bokotra ankavia ary alentao mankany amin'ny toerana misy ilay rakitra. Ny kopia / fanapahana / fetezana fampiasana hotkeys - Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V, respektivement.
fihodinan'ny: Raha te hamadika ilay sary dia tsindrio eo amin'ny zana-tsipìka eo an-tampon'ny faritra misy ny rakitra sary, ary avereno ao amin'ny lalana takiana.
Filan-kevitra: Mba hialana amin'ny môdely ny sary dia tsindrio fotsiny ny bokotra ankavia eo ivelan'ny faritra manodidina azy.
lesona: Ahoana no hananana tsipika ao amin'ny MS Word
Amin'ny ankapobeny, izany rehetra izany, ankehitriny fantatrao ny fomba hampidirana sary na sary ao amin'ny Teny, ary koa mahafantatra ny fomba hanovana izany. Na izany aza, tokony ho fantatra fa ity programa ity dia tsy sary, fa lahatsoratra iray amin'ny lahatsoratra. Maniry ny hahombiazanao amin'ny fivoarany bebe kokoa.
https://termotools.com mg.termotools.com © Teny 2019